IMacOS High Siera iqinisekisa i-firmware yotshintsho ukuthintela imiba yezokhuseleko | Ndisuka mac
IMacOS High Siera iqinisekisa i-firmware yotshintsho ukunqanda imiba enokubakho yezokhuseleko
Kusemthethweni ngoku. Inguqulelo yokugqibela yeMacOS ePhakamileyo yeSierra ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe kwiVenkile yeApple yeMac kwaye kancinci kancinci sifunda malunga neempawu ezintsha ezingachaphazeli ukusebenza kwale nguqulo intsha, kodwa gxila ekuphuculeni okanye ekugqibezeleni ukusebenza kwangaphakathi. Ngaphambi kokukhululwa kwenguqu yokugqibela ye-MacOS High Sierra, kuye kwafunyanwa isiqhelo esinoxanduva lokujonga i-firmware ye-Mac yethu ukuqinisekisa ukuba kwenziwe uhlengahlengiso olunokuthi lubeke ukhuseleko lwe-Mac yethu emngciphekweni.
Le ndlela iyayinyamekela jonga i-ID ye-Mac kunye ne-firmware yayo ngokuchasene nedatha egcinwe kwiziko ledatha le-Apple. Ukuba kukho uhlengahlengiso olufunyenweyo ngexesha lokujonga, umsebenzisi uya kumenywa ukuba athumele ingxelo ku-Apple ngokuzenzekelayo. Eli nqaku litsha lenzelwe iinjineli zeApple uCorey Kallenberg, uXeno Kovah noNikolaj Schlej, kwaye bayazisa ngeetweets ezisuswe ngoku kwiiakhawunti zabo ze-Twitter.
Le ngxelo ngaphandle kwedatha egcinwe kwi-NVRAM kwingxelo Kwaye baya kuvumela iApple ukuba ijonge ukuba ikhona na ingxaki kwiMac yethu, kodwa asazi ngokwenyani ukuba iApple izakwenza ntoni ngale datha. Akucaci nakubasebenzisi abaguqule i-firmware yabo yeMac Pro 4,1 ukuba ijongeke njengeMac Pro 5,1 okanye abo basebenzisi abenza iHackintosh, kodwa yonke into ibonakala ngathi ayizukuyenza nto ngayo.
Ngokwe-tweets apho u-Xeno Kovah abhengeze khona lo msebenzi, umyalezo aza kusibonisa wona malunga nokulungiswa iya kuboniswa kube kanye, umyalezo oya kusivumela ukuba sabelane ngengxelo no-Apple okanye siyirhoxise. Kude kube kolunye uhlengahlengiso olwenzekayo, iApple ayizukuphinda ibonise umyalezo onje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMacOS High Siera iqinisekisa i-firmware yotshintsho ukunqanda imiba enokubakho yezokhuseleko
I-HEVC, umgangatho omtsha wevidiyo yeMacOS ePhakamileyo yeSierra
Beka iifoto zakho kwisidlo kunye ne-Photo Size Optimizer, ngoku iyathengiswa